निर्वाचनपछि बढ्दो जनअपेक्षा र समृद्धिको सपना - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
निर्वाचनपछि बढ्दो जनअपेक्षा र समृद्धिको सपना - डा. रमेश पौडेल
यो निर्वाचन ऐतिहासिक थियो भन्ने कुरा बताइरहनु आवश्यक छैन । किनभने, नयाँ ंसंविधानको आधारमा हुने यो पहिलो आमनिर्वाचन हो । यसले एकातिर सयौं युवालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्दै छ भने अर्कोतिर ठूलो संख्यामा महिला, दलित र अन्य समुदायबाट समेत नीति निर्माणको तहमा पु¥याउँदै छ । सबै राजनीतिक निकाय पूर्ण बन्दै छन् । यसर्थ, भावी नेपालका निर्माणका लागि यो ऐतिहासिक कार्य पनि हो ।
नेपालका वामपन्थीहरू मिल्न सकेका भए यो परिणाम आज होइन, बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको पहिलो वा दोस्रो आमनिर्वाचनबाटै आउन सक्थ्यो । जनताले आज मात्र होइन, धेरै पहिलेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीहरू सके एक होऊन्, नभए निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर भए पनि जाऊन् भन्ने चाहन्थे, तर पार्टीहरूले त्यो बुझ्न सकेनन् । त्यसका लागि उनीहरूसँग पश्चात्तापबाहेक अरू विकल्प थिएन । तर, यसबाट लिन सक्ने शिक्षा भने महŒवपूर्ण रहेको छ ।
अल्पकालमा साधन र स्रोतको व्यवस्थापनका हिसाबले माथि उल्लिखित अपेक्षाबारे केन्द्रित बनेर दीर्घकालीन रूपमा नै योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । सरकारले कसरी लगानी भिœयाउने, कसरी देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, आफ्ना जिम्मेवारी के कारणले र कसरी अरूभन्दा पृथक र पारदर्शी तहले सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउन सके भने र एउटा सुशासित तह बनाउन सक्दा मात्र उनीहरूको दीर्घकालीन विकास सम्भव छ र अपेक्षा समेट्न सकिन्छ तर त्यसका लागि अहिलेको अवस्थामा पहिलो सर्त हो, सुशासन । सुशासनबिना सबै परिकल्पना असम्भव हुन्छन् ।